मर्कूस १५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१५ अनि बिहान झिसमिसेमै मुख्य पुजारीहरू, धर्म-गुरुहरू र शास्त्रीहरूका साथै पूरै यहूदी न्यायपरिषद्ले तुरुन्त आपसमा सल्लाह गरे। त्यसपछि तिनीहरूले येशूलाई बाँधे अनि लगेर पिलातसलाई सुम्पे। २ पिलातसले उहाँलाई प्रश्न गरे: “के तिमी यहूदीहरूका राजा हौ?” उहाँले जवाफ दिनुभयो: “तपाईं आफैले भन्नुभयो।” ३ तर मुख्य पुजारीहरूले उहाँलाई धेरै कुराको आरोप लगाउन थाले। ४ तब पिलातसले उहाँलाई फेरि सोध्न थाले: “के तिमी केही जवाफ दिंदैनौ? हेर, यिनीहरू तिम्रो विरुद्धमा कति धेरै आरोप लगाउँदैछन्‌।” ५ तर येशूले अरू केही जवाफ दिनुभएन। त्यसैले पिलातस अचम्म मान्न थाले। ६ कुरो के थियो भने, भीडले मागेको कुनै एक कैदीलाई तिनले हरेक वर्ष चाडको बेला मुक्त गर्नेगर्थे। ७ त्यतिबेला बरब्बा नाम गरेको मानिस केही विद्रोहीहरूसित थुनामा थियो, जसले विद्रोहको दौडान हत्या गरेका थिए। ८ तब भीड आएर पहिला-पहिला पिलातसले तिनीहरूका निम्ति जे गर्दै आएका थिए, अहिले पनि त्यही गर्नुपऱ्यो भनेर बिन्ती गर्न थाल्यो। ९ पिलातसले तिनीहरूलाई भने: “के तिमीहरू मैले यहूदीहरूका राजालाई मुक्त गरिदिएको चाहन्छौ?” १० किनकि ईर्ष्याले जलेर मुख्य पुजारीहरूले उहाँलाई सुम्पेका हुन्‌ भनेर तिनलाई थाह थियो। ११ तर मुख्य पुजारीहरूले उहाँको सट्टा बरब्बालाई मुक्त गरिदिने माग गर्न भीडलाई उक्साए। १२ तब पिलातसले तिनीहरूलाई फेरि सोधे: “त्यसोभए, तिमीहरू जसलाई यहूदीहरूका राजा भन्छौ, उसलाई चाहिं म के गरूँ?” १३ तिनीहरू फेरि कराए: “त्यसलाई खम्बामा टाँग्नुहोस्!” १४ तर पिलातसले तिनीहरूलाई भने: “किन? उसले के खराबी गऱ्यो र?” तर तिनीहरू यसो भन्दै झन्‌ चिच्याए: “त्यसलाई खम्बामा टाँग्नुहोस्!” १५ तब भीडको चित्त बुझाउन पिलातसले बरब्बालाई मुक्त गरिदिए तर येशूलाई भने कोर्रा लगाउने आदेश दिए अनि खम्बामा टाँग्न तिनीहरूको हातमा सुम्पे। १६ तब सिपाहीहरूले उहाँलाई राज्यपालको महलभित्र अर्थात्‌ चोकमा लगे र तिनीहरूले सेनाको पूरै टुकडीलाई त्यहाँ बोलाए। १७ अनि तिनीहरूले उहाँलाई बैजनी रङ्गको लुगा लगाइदिए र काँडाको मुकुट गुथेर पहिराइदिए। १८ अनि यसो भन्दै उहाँलाई अभिवादन गर्न थाले: “हे यहूदीहरूका राजा, प्रणाम!” १९ साथै, तिनीहरूले उहाँलाई नर्कटले शिरमा हिर्काए, उहाँलाई थुके अनि घुँडा टेकेर दण्डवत्‌ गरे। २० अनि गिज्याउनुसम्म गिज्याएपछि अन्तमा तिनीहरूले उहाँको बैजनी रङ्गको लुगा फुकालेर उहाँको आफ्नै लुगा लगाइदिए अनि उहाँलाई खम्बामा टाँग्न लगे। २१ त्यतिखेर सिमोन नाम गरेका साइरेनीवासी गाउँबाट आउँदै थिए। तिनी अलेक्जेन्डर र रूफसका बुबा थिए। तिनलाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सिपाहीहरूले पक्रे अनि उहाँको यातनाको खम्बा* बोक्न लगाए। २२ तिनीहरूले उहाँलाई गलगथा भन्ने ठाउँमा पुऱ्याए, जसको अनुवाद गर्दा अर्थ हुन्छ, खप्पर। २३ यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई नशालु पदार्थ मर्र मिसाइएको दाखमद्य दिन खोजे तर उहाँले पिउन मान्नुभएन। २४ तिनीहरूले उहाँलाई खम्बामा टाँगे अनि कसले के लिने भनी गोला हालेर उहाँको लुगा आपसमा बाँडे। २५ बिहानको नौ बजेको थियो अनि तिनीहरूले उहाँलाई खम्बामा टाँगे। २६ अनि यस्तो अभियोग लेखेर उहाँको शिरमास्तिर राखे: “यहूदीहरूका राजा।” २७ साथै, दुई जना डाँकुलाई पनि तिनीहरूले उहाँसँगै खम्बामा टाँगे, एक जनालाई उहाँको दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई देब्रेपट्टि। २८ * — २९ त्यो बाटो भएर जानेहरूले आफ्नो मुन्टो हल्लाएर खिसी गर्दै यसो भन्थे: “वाह! मन्दिर भत्काएर तीन दिनमा बनाउँछु भनेर तँ खुब फुइँ लगाउँथिस् हैन, ३० लौ यातनाको खम्बाबाट ओर्लेर आइज र आफैलाई बचाएर देखा।” ३१ त्यसैगरि मुख्य पुजारीहरूका साथै शास्त्रीहरूले पनि यसो भन्दै आपसमा ठट्टा गरे: “यसले अरूलाई त बचायो तर आफैलाई भने बचाउन सकेन! ३२ अब इस्राएलको राजा ख्रीष्ट यातनाको खम्बाबाट ओर्लेर आओस्, अनि त्यो देखेपछि हामी पत्याउँला।” उहाँसँगै खम्बामा टाँगिएकाहरूले समेत उहाँलाई गिल्ला गरिरहेका थिए। ३३ जब मध्यान्हको बाह्र बज्यो, तब सारा देशभरि अन्धकार छायो र दिउँसो तीन बजेसम्म त्यस्तै भइरह्यो। ३४ अनि दिउँसो तीन बजे येशू यसो भन्दै ठूलो स्वरले कराउनुभयो: “एली, एली, लामा सबख्थनी?” जसको अनुवाद गर्दा अर्थ हुन्छ, “हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईंले मलाई किन त्याग्नुभयो?” ३५ वरपर बसिरहेका कसै-कसैले यो सुनेर यसो भन्न लागे: “हेर, उसले एलियालाई बोलाउँदैछ।” ३६ तब कोही एक जना दौडेर गयो अनि अमिलो दाखमद्यमा स्पन्ज चोपेर त्यसलाई नर्कटमा राख्यो र यसो भन्दै उहाँलाई पिउन दियो: “होस्, होस्! एलिया यसलाई तल झार्न आउँछन्‌ कि आउँदैनन्‌, हेरौं न।” ३७ अनि येशू ठूलो स्वरले चिच्याउनुभयो, त्यसपछि उहाँ बित्नुभयो। ३८ तब मन्दिरको पर्दा* टुप्पोदेखि फेदसम्म च्यातिएर दुई फ्याक भयो। ३९ जब उहाँको सामुन्ने उभिरहेका सैनिक अफिसरले* उहाँ बित्नुहुँदा यस्ता घटनाहरू भएको देखे, तब तिनले यसो भने: “यी मानिस साँच्चै परमेश्वरका छोरा रहेछन्‌।” ४० त्यहाँ टाढैबाट हेरिरहेका स्त्रीहरूको माझमा मरियम मग्दलिनी, सानो याकूब र योसीकी आमा मरियम अनि सलोमी पनि थिए। ४१ उहाँ गालीलमा हुँदा तिनीहरू उहाँसँगै हिंड्थे र उहाँको सेवा-सुसार गर्थे। यसबाहेक उहाँसँगै यरूशलेम उक्लेका अरू थुप्रै स्त्री पनि त्यहीं थिए। ४२ साँझ पर्नै लागिसकेको थियो र त्यो दिन विश्राम-दिनको अघिल्लो दिन अर्थात्‌ तयारीको दिन* थियो। ४३ न्यायपरिषद्का प्रतिष्ठित सदस्य, अरिमथियाका यूसुफ, जो आफै पनि परमेश्वरको राज्यको बाटो हेरिरहेका थिए, तिनी त्यहाँ आए। अनि तिनले पिलातससामु गएर येशूको शव माग्ने साहस गरे। ४४ तर उहाँको मृत्यु भइसकेको छ कि छैन भनेर जान्न पिलातस उत्सुक थिए। त्यसैले तिनले सैनिक अफिसरलाई बोलाएर उहाँको मृत्यु भइसकेको हो कि होइन भनेर सोधे। ४५ सैनिक अफिसरसित यो कुरा पक्का गरिसकेपछि तिनले उहाँको शव यूसुफलाई जिम्मा लगाए। ४६ त्यसैले तिनले मलमलको कपडा किने र उहाँको शव तल झारेर मलमलको कपडाले बेह्रे अनि चट्टान खोपेर बनाएको चिहानमा राखे। त्यसपछि एउटा ढुङ्गा गुडाएर चिहानको ढोका बन्द गरे। ४७ तर मरियम मग्दलिनी र योसीकी आमा मरियमले भने उहाँलाई राखेको ठाउँ हेरिरहे।
^ मर्कू १५:२१ * अतिरिक्त लेख ६ हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १५:२८ * पुराना अनि अझ भरपर्दा पाण्डुलिपिहरूमा यो पद समावेश गरिएको छैन; तर केही पाण्डुलिपिहरूमा भने समावेश गरिएको छ र त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ: “अनि यसो भन्ने शास्त्रपद पूरा भयो, ‘उहाँ कुकर्मीहरूको साथमा गनिनुभयो।’ ”
^ मर्कू १५:३८ * मत्ती २७:५१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू १५:३९ * वा, “सय जना सिपाहीको नाइकेले।”
^ मर्कू १५:४२ * मत्ती २७:६२ को फुटनोट हेर्नुहोस्।